Minaaradda birta korantada birta Minaaradda birta xagalka waa tiir saxan oo leh soo-dejiye. Aagga xumbadu waxay ka kooban tahay bir xagal ah oo is barbar socda, iyo jihada habaynta ee birta xagasha waxay la siman tahay jihada socodka dareeraha. Cirifka fiiqan ee birta xagasha wuxuu ku yaal qaybta hoose, qaybta isgoyskuna waxay ku jirtaa qaabka "V". Waxaa jira farqi gaar ah oo u dhexeeya labada biraha xagasha isku xiga. Soo-dejiyayaashu waxay la mid yihiin saxaaradda guud. Dareeraha ku jira qaybta kore ...
Minaaradda birta xagalku waa tiir saxan leh hoos-u-deg. Aagga xumbadu waxay ka kooban tahay bir xagal ah oo is barbar socda, iyo jihada habaynta ee birta xagasha waxay la siman tahay jihada socodka dareeraha. Cirifka fiiqan ee birta xagasha wuxuu ku yaal qaybta hoose, qaybta isgoyskuna waa qaab "V". Waxaa jira farqi gaar ah oo u dhexeeya labada biraha xagasha isku xiga. Soo-dejiyayaashu waxay la mid yihiin saxaaradda guud. Dareeraha ku jira saxanka sare wuxuu ku qulqulaa birta xagalka "V" iyada oo loo marayo soo dajiyaha hoose, halka gaaska gaasku ka buuxsamayo dareeraha markuu ka soo baxayo farqiga shabakada, iyo xaalada socodka dareeraha gaaska ee saxaaraddu waxay la mid tahay ta shaandhada. saxan. Natiijooyinka waxay muujinayaan in hoos u dhaca cadaadiska xagalxiradaha birta birta ah uu yaryahay, awoodda isdhaafsiga gaaska uu weyn yahay, waxtarka saxaaraduna uu wanaagsan yahay, qaabdhismeedku fudud yahay, howsha iyo soo saaristu ay ku habboon tahay, qallafsanaantuna ay wanaagsan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxtarka taarikada taarikada shaashadda uma fiicna tan taagga taarikada weelka marka awoodda daaweyntu yar tahay. Munaaradda birta xagasha ayaa guud ahaan loo isticmaalaa berrinka, iyo tiirarka birta birta ah iyo birta birta ah ee munaaradda hoose guud ahaan laga isticmaalo aagga magaalooyinka maxaa yeelay aagga sagxadda ayaa ka yar munaaradda birta xagasha.
Hore: Munaaradda birta korontada
Minaaradda birta korantada birta birta birta birta korontada birta waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad aamin ah oo udhaxeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. 1980-yadii, dalal badan oo adduunka ka mid ah waxay bilaabeen inay adeegsadaan astaamaha biibiile bir ah qaab dhismeedka munaaradda markii la horumarinayo khadadka gudbinta UHV. Minaarada birta birta leh oo leh tuubooyin bir ah sida maaddada ugu weyn u muuqatay. Gudaha Japan, munaaradaha tubbada birta ah waxaa loo isticmaalaa 1000kV U ...
Tower Tower Xagasha Electric, Tower Xaraynta Power Steel, Qaab dhismeedka birta tuubada, Qaab dhismeedka Birta Prefab, Taawarka Isgaarsiinta Dowladda Hoose, Taawarrada birta korontada,